Archive du 29-nov-2021
Marc Ravalomanana “Tsy hanaiky lembenana intsony isika”
Tsy nitsitsy fitenenanana i Marc Ravalomanana ny sabotsy teo nandritra ny hetsika fameloma-maso n any Redynamisation ho an’ny Atoko TIM ao amin’ny Boribotintany I eto Antananarivo,
Efa hatramin’ny taona 2007, fony nandray ny toerana maha ben’ny tanàna azy ny filoham-pirenena ankehitriny, Andry Rajoelina, no efa niainana ity kolontsaim-panilihana ny adisoana ho amin’ny fitondrana teo alohany ity.
Abel Anicet any Egypta Mbola mpilalao mpisolo toerana aloha hatreto
Tao anatin’ireo lalao miisa 6 efa tontosan’ny ekipa vaovao misy azy dia ilay ekipa vao tafiakatra divizionina voalohany ao Egypta na ny Futur FC,
Mieli-patrana ny coronavirus Analamanga, Vakinankaratra, Menabe no be voa
Miakatra hatrany ny trangana coronavirus, mitombo ihany koa ny faritra ahitana azy. Tao Anatin’ny herinandron’ny 20-26 novambra 2021.
Nahomby ny fandatsahana orana Hivaha ve ny olan’ny delestazy lavareny ?
Ny tsapa dia miha mafy isan-kerinandro ilay delestazy...tany amin'ny roa volana lasa mody 5 minitra na maty mirehitra isa-minitra, avy eo lasa 10 minitra amin'ny hariva,...
Antananarivo sy ny manodidina Na tsy misy rano, na misy fa miloko volon-tany
Niha mafy ny herinandro teo ny fitokonan-drizareo teny Ambatomaro teny noho ny fijaliana amin’ny tsy fisian-drano. Sady efa mila mifoha maraina be,
Ambohijoky RN1 Mpianaka matin’ny taribin’ny JIRAMA
Vehivavy iray avy nitondra zaza niotra no fantatra fa maty teo no ho eo raha nandalo ny taribin’ny JIRAMA nikirozaroza tamin'ny tany ny Sabotsy lasa teo tokony ho tamin’ny 07 sy sasany tany ho any.
Raharaha anatin’ny Antoko TIM “Aleo mifampiresaka fa tsy mifanao toetra tsy zaka”
Niompana kokoa tamin’ny raharaha anatin’ny Antoko TIM ny lahatenin’ny Depiote Hanitra Razafimanantsoa ny sabotsy 27 novambra teo tetsy amin’ny Magro Behoririka nandritra ny “rédynamisation”
Avy nijery RUN Nidofotra tamin’ny hazo ilay fiara BMW
Fiara BMW iray no tra-doza omaly hariva mialoha kelin'Ambatomirahavavy raha hitodi-doha hiakatra hiazo an’ Antananarivo.
Manantitrantitra ny Otrikafo “Finiavana politika no andrasana amin’ny fanjakana”
Mampiteny ny moana ny zava-misy raha vao JIRAMA no resahana, hoy ny avy eo anivon’ny antoko politika Otrikafo. Tsy mitsahatra ny miha ratsy ny kalitao omeny ny vahoaka na amin’ny resaka jiro na rano, hoy izy ireo.
Minisitra Sophie Ratsiraka Nanatrika ny fivorian’ny mpandraharaha tany Frantsa
Nanatrika ny fivoriana niarahan'ireo mpandraharaha misehatra amin'ny fanafarana sy fanondranana asa-tanana malagasy tao Frantsa ny minisitry ny asa tanana sy haitao, Sophie Ratsiraka.
Miha mahantra ny Malagasy Tsy mahavaha krizy ny fanjakana
Tahaka ny hoe tsy eto Madagasikara izany fa niova firenena hafa isika raha mahatsiaro tampoka ny fampanantenana tamin'ny.propagandy 2018 sy ny zava-misy iainana ankehitriny.
Mampikolay indray ny RN44 Niakatra ny saran-dàlana ny taksibrosin’Ambato
Mampikolay indray ny làlam-pirenena faha-44 miazo an’Ambatondrazaka amin’izao fotoana izao satria mamotaka tanteraka. Misy ny ampahany efa namboarina,
Namontana Novelesin’ny mpanendaka ilay mpitondra moto
Miseho amin’ny endriny maro lahy ny asa ratsin’ireo mpanendaka sy mpamono olona amin’izao. Mpitondra moto iray tratra alina no voalaza fa novelesin’ireo mpanendaka avy any aoriana ny herinandro lasa teo teny Namontana.